China Summer Mens Shot-uwe pajamas High Quality New 100% Cotton Comfortable Men Sleepwear Set factory na ndị na-emepụta | Ruisheng
Summer Mens Shot-sleeved Pajamas High Quality New 100% Cotton Comfortable Men Sleepwear Setịpụrụ
Anyị bụ ndị ọrụ mmepụta ngwaahịa ọkachamara. Anyị na-emepụta pajamas ọnụ nke ụmụ nwoke nwere nnukwu aka ma n'ụlọ ma na mba ofesi, n'ihi na anyị nwere ezigbo ihe dị mma, atụmatụ dị mma na akụrụngwa dị mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ahaziri ngwaahịa, ị nwere ike mgbe niile kpọtụrụ anyị maka samples na ọhụrụ kwuru
Ihe: Adabara / ahaziri
Size: Ogo ọ bụla dị
Agba: Ngosipụta foto ma ọ bụ ahaziri ya.
Typedị .kpụrụ Bipụta
Olu akwa Ndị ọzọ
Ogologo Ogologo n'uju
Oge Mgbụsị akwụkwọ, Oge opupu ihe ubi, udu mmiri
Ogologo uwe aka (cm) Zuru oke
Lydị Mbugharị Na-Ngwaahịa Ihe
Ihe owu, Rịọrọ ihe
Ricdị ákwà Mara mma
Teknụzụ Biri ebi
Njirimara Na-agba ume
Ebe Si Malite Jiangsu, China
Aha ika RUISHENG \_ OEM
Temdị Ihe Pajamas
Logo Nabata Logo Ndị ahịa OEM
Agba Achọrọ Achọ
Mbupu Nyefee Ọsọ
MOQ Nabata obere ule
Ọrụ OEM ODM OBM
Ọnụ ala Nnukwu itiesgba Ọgụ
Rịba ama The price bụ maka ot ngwaahịa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ customization, biko pịa Kpọtụrụ anyị!
1. A ga-aza ajụjụ na ajụjụ niile n'ime awa 24.
2. Ogo dị mma gụnyere ọkọlọtọ mbukota bụ ihe kachasị mma ma kwụsie ike.
3. Kacha mma ugwo ọnọdụ.
4. Nabata nha omenala, akara nkeonwe, akara na mbukota!
1.We bụ otu onye na - ebute soplaya dabere na jingsu, China, nwere ahụmịhe azụmaahịa mba ụwa 10years. Anyị na-ere 40 mba ụwa, gụnyere Germany, France, Europe, USA. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya anyị na-eme ka nkezi 50% ntụgharị na-abawanye.
2.Onye ahia tinye otutu ika. Fọdụ enweela mmekọrịta anyị na 5-8 afọ.
3.We nwere Otu Ndị Azụmaahịa 2: Akwụkwọ, uwe. Ahịa ọ bụla nwere ahụmahụ ọrụ afọ 8. Anyị nwere ike na-enye gị Onye-nkwụsị ọrụ niile na ngwaahịa. Ezigbo ndị otu na-emekọrịta ihe nwere ike ikwe nkwa ịzaghachi ụdị nyocha niile n'ime awa abụọ. Omenala ahịa anyị na-aga n’ihu na ọrụ otu.
4. Anyị nwere njikwa ike na njikwa njikọta ọkọnọ. Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị, awa abụọ abụọ pụọ na lianyungang. Anyị na-ahazi akwa / ihe, dịka anyị na-achịkwa ya n’aka yarn ruo dai ruo wee mee; Anyị na-enyefe ngụkọta ọrụ sitere na imewe / sere, na mbụ ụdị, ụdị ikpeazụ, ụdịPPP, mepụta ọtụtụ, rue nyocha nke mbu.
Nke gara aga: Mens na-agba ọsọ ahụike uwe ogologo uwe mgbatị egwuregwu na-adabara ngwa ngwa
Osote: Ski jaket ọkachamara elu mma windproof na a pụrụ ịdabere na ya
Omenala Winter Down jaketị Men High Quality Puff ...
Elu àgwà ndị nwoke owu vest ọrụ ...
Ensmụ nwoke na-agba ọsọ uwe ogologo uwe agbatị ...
Uwe mkpuchi akwa akwa akwa akwa akwa ...
Akwa ụmụ nwoke Polo Shirt Akwa na Polo emb ...
N'èzí Mens windproof jaket ọkachamara elu ...